March 2012 - Page 2 of 5 - iftineducation.com
iftineducation.com – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdulaahi Yuusuf Axmad ayaa saakay aroor hore ku geeriyooday Isbitaal kuyaala Dalka Isku taga Imaaraadka Carabta halkaas uu in mudo ah ku xanuunsanayay. C/laahi Yuusuf Cabdulaahi Yuusuf Madaxwenihii horee ee Soomaaliya ayaana ku Geeriyooday Isbitaalka Sheekh Zaa’id halkaas uu kujiray maalmahan kadib markii uu lasoo darsay Xanuun dhinaca Sanbabada iyo Kilyaha iyadoona ugu danbeytii…
Sacuudiga aya helikobtaro u adeegsanaayo xajka iftineducation.com – Dalka Sacudi Carabia ayaa markii ugu horaysay xajka ku adegsaday helikobtaro. Helikobtaradani ayaa la soo kiciyay ka dib markii babuur dad xajinaaya wadday ay shil gashay. Madaxa howlgalada hawada Cabixakim Sacduun ayaa sheegay in helikobtarada ay adeegsadeen ka dib markii uu soo gaaray war ah in dad ka soo xajiyay dalka Pakistan…
.. Turkish airline mogadishu-istanbul. iftineducation.com – Kadib markii madaxda dowladda ku meel-gaarka ah ay isku qilaafeen xaalka diyaaradda Turkish Airlines iyo sidii laga yeeli lahaa lacagaha xad-dhaafka ah ee lagu soo rogay duulimaadyada Istanbul-Muqdisho, ayaa waxa la filayaa in shirkadda Turkish Airlines ay maanta go’aan ka gaarto duulimaadkeeda Muqdisho. Duulimaadkii jimcihii lasoo dhaafay ayaa baaqday kadib markii ay shirkadu sheegtay in lacagaha…
iftineducation.com – Cumar Shafiq Xamami Abu Mansuur Al-Ameriki wuxu ku dhashay xaafada Daphne ee duleedka Mobile, Alabama ee dalka Maraykanka taariikhdu markey aheyd Maajo 6, 1984. Cumar waxa iska dhalay aabe Suuriyaan Muslina ah iyo hooyo Maraykan Kirishtaana ah oo haysata mad-habta Southern Baptist ee Protestant-ka mayalka adag ah. Cumar oo ku koray diin la’aan wuxu bilaabay inuu sheegto diinta Islaamka markii uu qaangaaray ee…
Kumanaan Dada AyaaSaf Ugalay 5 Maalin in Ay Noqdaan Qofka Ugu Horeeya Ee iibsada iPad3 Awgeed Aduunka Oo iDil.
aadan21 / March 20, 2012
… iPad3 iftineducation.com – Iney noqdaan awgeed qofka ugu horeeya ee iibsada iPad ka cusub, iPad3, kumanaan fans Apple waxey saf ugaleen iney noqdaan awgeed qofka ugu horeeya ee iibsada iPad3. Arintaan ayaa waxey dhacday marka lasoo bandhigaayay iPad3-ga cusub. London, Inggris, fanska iPad waxey jiifteen jidka banaanka shirkada Apple Inggiris si ay u noqdaan qofka ugu horeeyay ee iibsada…
aadan21 / March 18, 2012
iftineducation.com – Cilmi baaris la sameeyay ayaa shaaca ka qaadeysa in cidlada ama kalinimada ay tahay infection suura gal ay tahay in qof kale uu qaadi karo. Natiijada baaritaankaan ay sameeyeen qubarada reer Mareykanka ee socotay muddo 10-sano ah ayaa intaas ku dareysa in fursadaha ah in aad noqoto qof jecel kalinimada ama cidlada ay kordheyso 50% haddii aad si joogto…
iftineducation.com – Saraakiil u hadlay dowladda Kenya ayaa sheegay maanta oo khamiis ah in ay aad u badan yihiin dhalinyarada Shabaab ku biiraya ee ka tagaya dalka Kenya. Afhayeen u hadlay wasaarada aminga dowladda ayaa sheegay in ay jiraan tiro badan oo ah dhalinyarada reer Kenya in ay ku biiraan Shabaab-ka dagaalama Soomaaliya. Warbixin dhawaan ay soo saartay QM ayaa lagu…
. Seynab Laba Dhagax oo 21 Sano Kadib Muqdisho Tagtay iftineducation.com – Fanaanada caanka ah Seynab Xaaji (Seynab Laba dhagax) oo ka mid ah Fannaaniinta Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha ayaa mudo 21 sano sano kadib waxa ay dib ugu laabatay gudaha wadanka Soomaaliya. Fanaanada ayaa saaka waxa ay ka soo degtay Garoonka diyaarahada ee Magaalada Muqdisho halkaasi oo ay…
. Dave Richards iftineducation.com – Gudoomiyaha Premier League Sir Dave Richards ayaa ku eedeeyay FIFA iyo UEFA inay kubada cagta ka soo xadeen England. Waxa uu ka hadlayay shir isboortiga looga hadlayay oo ka dhacay Qatar, waxaana sidoo kale ka qeyb galayay madaxweyne ku xigeenka FIFA Amiir Ali Bin Hussein. Richard ayaa u sheegay si ku celcelis ah dadkii ka soo…
iftineducation.com – Sarkaalka ugu sareeya ciidamada isba-heysiga NATO ayaa howlgal dhinaca Amniga Internetka ah galay kadib markii cinwaan been abuur ah oo barta Facebook-ga ay Magaciisa u isticmaaleen basaasiin u dhalatay Dalka Shiinaha kuwaasoo xaday siro Badan oo muhiim ah. Saraakiisha ugu sareeya ciidamada Dalka Ingiriiska iyo Shaqaalaha Wasaarada Difaaca Ayaa fahmay ama ogaaday marka ay arkeen fariimo lagu codsanayo in…